Israel Kurambidza Vagari Vasina Kuvharirwa kubva kuZviitiko Zvevanhu Zvese Kusanganisira Masinagoge
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel Kurambidza Vagari Vasina Kuvharirwa kubva kuZviitiko Zvevanhu Zvese Kusanganisira Masinagoge
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutungamiriri weIsrael Naftali Bennett
Vaya vanoramba kubayiwa majekiseni "vari kukanganisa kushanda kwedu tese," Mutungamiriri weIsrael Bennett akazivisa.
Huwandu hwezviitiko zvitsva zvecoronavirus muIsrael zvinoramba zvichikwira.
Vasina kucheneswa vechiIsrael havazobvumidzwa panzvimbo ipi neipi nevanhu vanopfuura zana, vese vari mukati nekunze.
Sayenzi yakajeka: majekiseni anoshanda, anoshanda, akachengeteka.
Vachangosarudzwa Mutungamiriri weIsrael Naftali Bennett vazivisa nhasi kuti vese vasina kuvharirwa vagari ve Izirayeri ichakurumidza kurambidzwa kubva kunzvimbo dzenzvimbo dzekunze kana dzekunze dzinobata vanhu zana kana kudarika. Kurambidzwa uku kunosanganisirawo masinagoge.
Vanhu vanoramba mushonga weCOVID-19 vari "kukanganisa mashandiro edu tese," Bennett akadaro nhasi, sezvo huwandu hwezviitiko zvecoronavirus munyika zviri kuramba zvichikwira.
Kana munhu wese akawana mushonga, hupenyu hunogona kudzoka pane zvakajairwa, asi kana vanhu miriyoni vakaramba mamwe mamirioni masere vanofanirwa kutsungirira kukiyiwa, Mutungamiriri akawedzera.
"Pane nguva apo hurukuro iyi inofanira kumira," Bennett akaudza nyika. "Sayenzi yakajeka: majekiseni anoshanda, anoshanda, akachengeteka."
Kutanga musi waAugust 8, Bennett akazivisa, chero munhu anoramba kubayiwa jekiseni haazobvumidzwa panzvimbo chero ipi "pamusoro pevanhu zana, zvese zvemukati nekunze" - kusanganisira dzimba dzemitambo, zviitiko zvemitambo, nedzimba dzekunamatira. Kuti vapinde, vanhu vanofanirwa kuratidza humbowo hwejekiseni, humbowo hwavaive nahwo COVID-100 uye vakapora, kana muyedzo wakashata, wakawanikwa nemubhadharo wavo.
Israel yanga ichishandisa mushonga wePfizer-BioNTech mRNA coronavirus. Sekureva kweBazi Rezvehutano, kushanda kwejekiseni pakurwisa chirwere kwakamira pa64% uye kurwisa chirwere chakakomba pa93%.
Mai Jane Godfrey anoti:
Nyamavhuvhu 16, 2021 pa02: 22
Izvi zvakashata kwazvo uye hazvina kunaka sekuenda kwesainzi zvinotyisa uye zvinokuvadza zvakanyanya kumusha kwedu. Dai uyu mutungamiriri mutsva weIsrael ainyatso kudzidza sainzi iri kumashure kweaya majekiseni evhavhi, angadai aona kuti chikonzero chekuti nyaya dzecovid dzakwira mukati meIsrael chaimo imhaka yenjodzi dzecovid pachadzo kwete nekuda kweavo vakaramba kubayiwa jekiseni ivo pachavo uye mushonga wekuyedza uyo wakatotadza inzira dzekuchengetedza, sezvo mhuka dzese dzaishandiswa mumakwara emishonga iyi yakafa, Dzese.